FAMPAHALALANA SY SARY WOLFDOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary Wolfdog
Wolf / Dog Hybrid Dog
'Captain dia amboadia amboadia avo lenta. Liana te hahafantatra izy fa matahotra be / saro-kenatra izay tena fahita amin'ny amboadia amboadia avo lenta. Toy ny an'ny HC hafa dia tsy nanao biby an-trano tsara izy noho ny fironana manimba. Ny fahazoana atiny avo azo ekena ao an-trano dia maharitra fotoana ary tsy dia fahita loatra. Ny sary 3 voalohany dia an'ny kapiteny manodidina ny 8 volana amin'ny palitao ririnina talohan'ny tranony voalohany. Ny roa faharoa dia an'ny kapiteny taorian'ny fandriany voalohany tamin'ny 1 taona. Ny amboadia amboadia avo lenta dia teraka mandritra ny lohataona satria tsy misy afa-tsy tsingerina hafanana iray isan-taona. Matetika ny atiny antonony dia tsy misy afa-tsy tsingerina iray isan-taona ihany koa. '
Wolfdogs dia azo faritana ho namana kokoa noho ny biby fiompy. Izy ireo dia marani-tsaina kokoa noho ny ankamaroan'ny karazana alika 'an-trano', mahalala ny tenany, mahalala ny manodidina azy, hanao fanamby na dia ireo mpikarakara za-draharaha indrindra aza amin'ny hamafin'ny fony ary ny fihetsika 'inona no ao anatiny ho ahy', ary amin'ny ankapobeny no canine azo vinavinaina indrindra ho amboadia no maodely amin'ny fitondran-tena amin'ny alika ary ny amboadia dia maneho fihetseham-po tsara tokoa.
Ny lamina ankapobeny ho an'ny atin'ny amboadia dia 1-49% no raisina ho ambany votoat (LC), 50-74% dia raisina ho Mid Content (MC), ary 75% + dia heverina ho avo lenta (HC) mety misy atiny avo Ny toetra alika 1-3 fa raha tsy izany dia tokony tsy hitovizany amin'ny amboadia madio.
Mazava ho azy fa misy fizarazaran'ireo fanasokajiana ara-dalàna izay mifanindry toy ny ambany atiny, ambany ambany, ambany ambany, atiny midina, ambony afovoany, avo lenta, atiny avo, ary atin'ny amboadia no ampiasaina hilazana ilay biby. Ireo teny ireo dia matetika ampiasaina amin'ny famonjena rehefa tsy fantatra ny tena karazana genotype. Ny genotype dia biby iray% mifototra amin'ny tsipika VERIFIABLE. Ny tsipika voamarina dia TSY taratasin'ny CKC satria ny biby rehetra dia afaka misoratra anarana mora foana amin'ny CKC ary ny CKC dia tsy manamarina ny isan-jato. Betsaka ny mpiompy tsy mahay mandanjalanja no hampiasa taratasy CKC amin'ny fanandramana hanamarina ny andalan'ny biby.
Ny Phenotyping dia fomba iray hanampiana amin'ny famaritana ny atin'ny amboadia na biby misy razambeny tsy azo hamarinina na manampy amin'ny famaritana raha misy mpiompy misolotena ny biby fiompin'izy ireo (toy ny hoe tsy misy / ambany ny atiny avo lenta). Ny atiny avo lenta dia tsy hijery sy hanao toy ny alika mihitsy, tsy azo atao izany. Ny atiny antonony dia hanana isa marobe ho an'ny amboadia kely kokoa noho ny toetran'ny alika. Ny atiny ambany dia hanana toetra amboadia kely kokoa noho ny toetran'ny alika.
Lisitry ny lisitra, ny toetran'ny amboadia bebe kokoa no avo kokoa ny atiny. Na izany aza tadidio fa ny toetra vitsivitsy dia tsy midika hoe atin'ny amboadia satria ny amboa sy ny amboadia dia mizara endri-javatra mitovy amin'izany ary toetra amam-panahy miangona izay mahay mamantatra ny atin'ny amboadia amin'ny alàlan'ny fenotyping.
Olon-dehibe: tratra tery (ny tongotra eo anoloana dia tokony hikasika na hikasika mihitsy aza rehefa mijanona), Tongotra lehibe, rantsan-tànana amin'ny Internet, Long Muzzle, Tsy misy fijanonana (manondro eo anelanelan'ny handrina sy ny molotra, tokony hidina tsimoramora), Kavina mainty na Taupe (tsy mazava mihitsy ), V-Cape, volom-boaloboka (volon'ondry tokana no tokony ho maro loko), Tailotra mahitsy, Tailan'ny boribory, Tail Black Tipped (ankoatry ny arctic), ny tongony eo aloha dia somary mivadika ho any ivelany, Cow Hocked, Lanky (tongotra lava), Slanted Maso, maso mainty miolomaso, Orona mainty, molotra mainty, lokon'ny maso (mavo, volondavenona, volontsôkôlà, maitso, Amber) manga dia tsy dia fahita firy amin'ny zavatra avo lenta, Palitao mifangaro, saron-tava mifangaro, sofina kely, sofina boribory, sofina boribory tsara (tsia mavokely mampiseho amin'ny alàlan'ny), Track Single
sarin'i shih tzu terrier mix
Amin'ny fahaterahana / zazakely:
Teraka mainty / mainty ary misy loko amin'ny lokony rehefa mandeha ny fotoana (ny atiny avo sasany mety misy iray na roa amin'ny fako teraka fotsy miaraka amina fiompiana tsipika, amin'ny fiompiana, kilema ara-pirazanana, sns…), Tsy misy marika miavaka rehefa teraka (tokony ho mafy orina miloko misy fiviliana kely), ny sofina dia tokony hiarina ary hiarina mandritra ny 3 herinandro.
Arakaraka ny toetran'ny amboadia dia mety miovaova be. Na ny toetra amboadia na ny toetran'ny alika an-trano dia tokony hojerena raha liana amboadia ianao.
Toetr'andro avo lenta: ny amboadia amboadia avo lenta dia mizara ny ankamaroan'ny toetra amam-panahiny mitovy amin'ny amboadia. Satria ny amboadia amboadia avo lenta toy izany dia matetika matahotra be, aleony miery amin'ny olon-tsy fantatra, TSY miaro izy ireo, mety hahazo hazo iray na roa fampitandremana / chuffs / fidradradradrana hampahafantarinao anao fa misy vahiny eo alohan'ny fialan'ny biby.
Ny fikirakirana isan'andro manomboka amin'ny faha-10 andro ateraky ny fianakaviana mivantana dia tadidio tsara fa ny alika kely (samy amboadia, amboadia na alika) dia tena iharan'ny aretina amin'izao fotoana izao ary ny fifandraisana amin'ny olona ivelan'ny fianakaviana dia mety hampidi-doza ny fahasalamanao. “Ny mpikarakara olombelona dia tsy maintsy manomboka mifandray alohan'ny fotoana, indrindra eo anelanelan'ny 10-14 andro nahaterahan'ny zaza. Nasehon'ny fikarohana fa raha tsy voatazona ny zaza mandritra ny fotoana ifamatorana mafy mandritra ny 21 andro voalohany, dia mety hamaly amin'ny fomba feno tahotra olona sy babo izany. ” Ny fikirakirana dia tsy maintsy mitohy hisorohana ny fahatapahana amin'ny fiarahamonina.
Ny vanim-potoana faharoa amin'ny fifamatorana kritika dia mitranga amin'ny herinandro 6-8.
Eo anelanelan'ny enina sy valo herinandro, ny fahavononanan'ny alika kely hanatona sy hifandray amin'ireo olon-tsy fantatra dia lehibe noho ny fitandremany voajanahary. Ity fe-potoana ity dia heverina ho vanim-potoana mety indrindra hampidirana zaza ao an-trano sy ny manodidina azy vaovao. Ny fandalinana vaovao kosa dia manome soso-kevitra fohy kokoa - 7 ½ hatramin'ny 8 herinandro (Serpell & Jagoe, 1999 Slabbert & Rassa, 1993 ary Fox sy Stelzner, 1966).
Mandritra io dingana io, ny alika kely dia tokony hampiharihary miandalana amin'ireo fanentanana mety hampatahotra toy ny ankizy, ny paositra, ny mpanadio vovo, ny kapoaka, ny tabataba, ny tabataba mafy, sns. Eo anelanelan'ny valo sy roa ambin'ny folo herinandro dia tokony hampahafantarina azy ireo koa ny ny toerana, ny toe-javatra ary ny toe-javatra mety hosedrainy rehefa lehibe izy. Tsy ny pups ihany no mametaka fifandraisana amin'ny olona mandritra io dingana saro-pady io, fa koa amin'ny toerana. ”
Ny atiny avo lenta dia manan-tsaina indrindra ary hizaha toetra ny sakaizanao. Raha tsy hoe manana kennel enina lafiny izay lafiny efatra ara-dalàna amin'ny fefy iray miampy ambony sy ambany vita amin'ny rojo mavesatra na takelaka omby dia tsy misy izany porofo baomba izany (ary na dia izany aza dia mety hahita teboka malemy toy izany ny amboadia toy ny faritra harafesina na simba).
Amin'ny ampahany betsaka misy atiny avo lenta, tsy misy izany antsoina hoe 'alika an-trano' izany. Na dia misy olona izay nahomby tamin'ny fitondrana atiny avo lenta tao an-trano dia tsy izany no fanao ary matetika izy ireo dia tsy afaka mamela ilay biby tsy misy mpiambina. Izany dia satria ny fehezan-teny momba ny biby 'mihinana anao any ivelan'ny trano sy ao an-trano' dia nilalao. Amin'ity tranga ity dia TSY miresaka sakafo isika. Tsy fahita amin'ny votoatiny avo ny mitsako ny fanakao, mitsako ny drywall ao an-tranonao, mitsako tariby, mitsoka varavarana, mitsako ny sisin'ny trano, izay azon'ny vavany atao. Ny fihetsika tsy eken'ny rehetra izay matetika hita amin'ny atiny avo dia ny mitsambikina amin'ny latabatra, fanaka ary indraindray aza ny tampon'ny vata fampangatsiahana.
Ny amboadia amboadia avo lenta no mety tsy te hampifaly anao. Na dia be fitiavana aza izy ireo dia tsy mety manao tetika, mipetraka rehefa angatahina, mijanona, manodina, sns ... raha tsy hoe misy varotra mendrika ny fotoanany (izany hoe sakafo / fitsaboana) ary na dia mety tsy mandeha aza izany.
Noho ny fihazana haza be dia be ny ankizy kely, saka, na alika kely dia tsy tokony havela irery hanana amboadia amboadia avo lenta. Ny zaza mihazakazaka mitabataba dia azo inoana fa mety hamaly ny valin'ny fivelomany ary mety hitera-doza na ho faty mihitsy aza. Azafady mba mariho fa tsy toetra amboadia fotsiny io, fa ny alika hafa (indrindra ny karazana avaratra) dia mazàna manana fiara fitadiavana hazaza ihany koa. Na dia miaraka amina fiarahana miasa amina saka na alika kely aza ny atiny avo lenta dia tsy tokony havela irery irery ihany koa.
Toetran'ny atiny afovoany: Ny atiny afovoany dia mirona amin'ny fiaraha-monina bebe kokoa noho ny ao anatiny. Afaka mandany fotoana hanafanana olona tsy fantany izy ireo ary hatahotra be aloha, nefa amin'ny faharetana dia mazàna matoky haingana kokoa. Ny atiny afovoany izay tsy dia mifanerasera loatra dia tsy dia mety ho lasa 'mandehandeha' noho ny atiny avo miaraka amin'ny tsy fahampian'ny fiaraha-monina. Miaraka amin'ny atiny antonony fananahana tsara dia mety hivoaka nefa maro no hitazona karazana saro-kenatra manodidina olon-tsy fantatra. Ny atiny afovoany dia matetika azo entina ao an-trano na dia mety olana aza ny fitsakoana, dia mazoto manome sitraka kokoa noho ny atiny avo lenta izy ireo.
Mids dia amin'ny ankapobeny dia tsara kokoa amin'ny biby kely noho ny atiny avo lenta fa matetika ny amboadia dia afangaro amin'ny karazany Avaratra, GSDs, Border Collies, na karazana hafa miaraka amin'ny mpamily haza lenta dia tokony hitandrina ny tompony rehefa manodidina ny ankizy, saka, na kely izy ireo. alika. Ny atiny afovoany koa dia mety hanimba.
pitbull manga heeler mifangaro alika kely
Toetr'andro ambany: ny atiny ambany no safidy tsara indrindra ho an'ny olona vaovao amin'ny amboadia. Matetika izy ireo no olona be mpitia indrindra, vonona ny hampifaly sy tsara indrindra ao an-trano nefa mitazona ny faharanitan-tsaina sy ny fahatsiarovan-tena momba ny atiny avo lenta. Ny atiny ambany dia mora ampiofanina na dia mafy loha aza indraindray. Ny atiny ambany ihany koa no tena mety hahomby amin'ny ankizy, saka ary alika kely. Na izany aza, ny saka dia mazàna mbola raisina ho toy ny remby. Ny fiaraha-monina aloha dia afaka manampy amin'ny fanafoanana ny ankamaroan'ny risika.
Aza adino koa fa ny fiompiana izay tsy mitaky fiheverana ny toetra dia mety hiteraka biby tsy milamina (mpiompy sasany fantatra fa manana amboadia mahery na amboadia manana olana ara-pitondra-tena). Tsy voatery ho an'ny 'amboadia' amin'ny biby izany fa satria ny biby mahery setra dia nompiana vao mainka nampiroborobo ny fitondran-tena ratsy amin'ny zaza.
Ny tsy fandriam-pahalemana dia tsy voatery noho ny fiompiana amboadia 'mahery setra' isaky ny miteny. Ny matetika mitranga dia ny tsy fitoviana amin'ny toetran'ireo alika voafantina hiampita amboadia. Ohatra, ny tsipika fiasan'ny Mpiandry Alemanina sasany dia manana fanaingoana voajanahary amin'ny herisetra, fiarovana ary / na fanamafisana. Izany no antony, amin'ny alàlan'ny fiofanana sahaza azy ireo, dia manao alika polisy sy fiarovana izy ireo. Raha afangaroinao amin'ny toetran'ny amboadia sy mahamenatra ity toetra ity dia tsy hilamina kokoa ilay amboadia noho ny fifanolanana anatiny noforonin'ireo génetika roa mifanohitra ireo. Indraindray dia hisintona ilay amboadia ary indraindray dia hasiaka izy, tsy misy vinavina foana. Amin'ny toe-javatra iray dia mety tsy hihetsika ny amboadia. Avy eo amin'ny toe-javatra mitovy amin'izany dia mety hanandrana hanao herisetra ilay amboadia. Tsy ho vitanao ny maminavina ny ho avy amin'ny fitondran-tena taloha. Ity fironana ity dia tsy azo 'zarina amin'izy ireo'. Ny 'fandrika' tsy voaporofo eo anelanelan'ny fahamenarana sy ny herisetra dia ho azo atao ary tsy azo vinavinaina na inona na inona 'atiny' an'ny amboadia, noho ny karazany nifangaroany. Ity dia vokatra mampalahelo amin'ny fiompiana tsy fantatra, tsy mitandrina. Ny wolfdog dia mandoa ny vidiny miaraka amin'ny ainy rehefa antsoina hoe 'ratsy' izy avy eo.
Salanisan'ny: 26-34 santimetatra lahy sy vavy mitovy. Ny amboadia amboadia ambany dia mazàna ho amin'ny lafiny fohy kokoa, fa ny atiny avo kokoa kosa mankany amin'ny lafiny avo kokoa.
Ny lanjan'i Wolfdogs eo anelanelan'ny olon-dehibe dia 60 ka hatramin'ny 120 pounds, fa ny fahazoana an'io ambony io dia tsy mahazatra ary matetika dia lehilahy amin'ny palitao ririnina. Ny fitakiana zavatra mihoatra noho izany dia tsy isalasalana fa fampahalalana diso na fanitarana.
Amin'ny ankapobeny dia amboadia amboadia dia biby salama miavaka. Tsy manana olana ara-pahasalamana iraisana toy ny hip dysplasia, sns izy ireo, saingy mazava ho azy fa hositranina amin'ny aretina kaninina mahazatra toy ny parasy, ny kiboty, ny fo (raha tsy voatsabo amin'ny fisorohana) aretina an-tenda toy ny parvovirus, distemper, rabies, sns izay tokony hatao vaksiny fanoherana toy ny alika hafa sy ny aretina hafa toy ny kohnel kennel, coccidia, giardia, sns. Mariho fa ny mpitsabo biby sasany dia tsy hitondra ny amboadia am-potony sy / na avo lenta, koa aza hadino ny miantso ny tobim-panafody misy anao mba hanamarina alohan'ny handraisana.
Eto no mety mahalasa lafo ny raharaha. Low's sy mids maro dia afaka miaina anaty fefy mahazatra. Na izany aza, ny atiny avo lenta matetika dia mitaky fefy 6-8 ft, rantsana, diguard ary hotwire mba hisorohana ny fandosirana. Ny biby mankaleo dia biby tsy faly ary mety hanandrana mivezivezy kokoa. Tsy tokony hisy bikan-tsambo ao anaty ny fefy izay mety hihazona tongotra, ny fefy dia takelaka omby na rohy mavesatra am-perinasa (wolfdogs dia fantatra fa manaikitra amin'ny alàlan'ny chainlink malemy kokoa), na koa ny fefy vinyl. Tsy soso-kevitra i Wood satria manaratsy azy amin'ny farany ary mitera-doza raha vao manomboka simba / osa. Ny Mids sy ny atiny avo lenta no tena mety hanandrana handositra ny haavon'ny halavany dia tsy ampy foana satria ny amboadia dia afaka mihanika ara-bakiteny avy amin'ny fefy rojo / fefy tontonana omby. Mandra-pahalehiben'ny biby anao dia tsy ho fantatrao raha mety hitera-doza izy ireo.
Misy atiny avo lenta izay mety ho voafehy mora foana ary atiny ambany izay mpanakanto afa-mandositra. Miankina amin'ny ratsy fotsiny no tadiavin'ny bibinao, raha mankaleo azy izy ireo, raha misy zavatra amin'ny lafiny hafa amin'ny fefy izay tena mahaliana azy ireo, sns…
Fanamarihana: Mety ho tandindomin-doza ny fanaovana fefy hazo sy vinazy ho voakenda.
Ny fefy matevina fefy (TSY misy tariby tsy misy herinaratra / tsy misy idirana) dia mety indrindra amin'ny toerana ananany toerana malalaka hipetrahana sy filalaovana. Wolfdogs koa dia biby ara-tsosialy ary tokony hanana namana sakaiza iray hafa farafaharatsiny.
Wolfdogs amin'ny ambaratonga atiny rehetra dia mitaky fanentanana ara-tsaina betsaka ary koa fanatanjahan-tena. Ny sasany amin'ireny dia azo atao ao anaty vala misy azy ireo amin'ny filalaovana lalao amin'izy ireo. Mila fanatanjahan-tena tafahoatra i Wolfdogs. Ny 'andro fitsaharana' dia adiny telo farafahakeliny. Ny andro ara-dalàna dia tokony ho 5 ora farafahakeliny hetsika ataon'ny fihazakazahana, fanofanana fikarohana, fisarihana sledges / carts. Ny ankamaroany dia afaka mandeha an-tongotra amin'ny tadiny toy ny alika hafa, ary tokony handeha isan'andro, ara-dalàna. Indraindray ny atiny avo dia mety mampatahotra amin'ny toe-javatra mandeha sasany ary mety hahomby kokoa izany any amin'ireo faritra an-tongotra ambanivohitra sy any ambanivohitra. Tsy tokony hananana amboadia amina tontolo an-tanàna. Ny fonenan'ny amboadia dia tsy maintsy ho lehibe (20x20 farafahakeliny 'ho an'ny biby 1-2) ary tokony hanana toerana hiafenana sy hialofana, zavatra hianika (tsy akaikin'ny fefy!), Kilalao sns. Matetika mitondra endrika vaovao Ny fampanan-karena dia lakilen'ny fihazonana amboadia am-pifaliana sy salama.
Fanamarihana: ny amboadia dia tokony handeha amin'ny tadiny roa. Ny iray mifatotra amin'ny vozon'akanjo na fehin-kibo ary ny faharoa fehin-kibo. Ny kofehy mifamatotra amin'ny vozon'akanjo / harness dia tokony ho ny fehin-kibo lehibe indrindra, ny slip lead dia ny manao backup raha misy zavatra mitelina ilay biby, satria raha mivoaka avy eo amin'ny harness / collar izy ireo rehefa mikoropaka dia mety bolt eny izay mampidi-doza azy ireo amin'ny fahaverezana, tafiditra amin'ny fanaraha-mason'ny biby, voadonan'ny fiara, sns ...
13-16 taona eo ho eo
Ankizy 4-6 eo ho eo
Wolfdogs dia manana palitao roa sosona izay lasa tena matevina mandritra ny ririnina. Io dia ahafahan'izy ireo mahazo aina any ivelany toy ny an'ny havany. 'Atsofohan'izy ireo' ny palitaony ririnina (very ny palitao rehetra) amin'ny lohataona ary amin'izao fotoana izao dia mila fikarakarana be dia be. Ny borosy style 'Rake' dia tena ilaina amin'izany. Raha tsy izany dia matetika ny borosina ankapobeny isaky ny roa herinandro. Araho maso akaiky ny volon'ny rambony sy ny volony ao ambadiky ny sofina satria ireo faritra ireo no tena mety manjavozavo.
sarin'alika alika omby amerikana
Wolfdogs dia tonga tamin'ny alàlan'ny fiampitana amboadia madio nateraky ny fambolena volom-borona miaraka amina alika mitovy endrika (izany hoe: Malamute, GSD, Husky-karazany). Tsy noforonina velively izy ireo tamin'ny alàlan'ny famelana alika vavy mifatotra any ivelany ao amin'ny faritry ny amboadia, na amin'ny alàlan'ny fampiasana amboadia 'norobaina toy ny alika kely. Ny ankamaroan'ny amboadia dia amboadia 'wolfdog x wolfdog', fa ny sasany kosa dia mbola itondrana 'wolfdog x wolf' na ho an'ny amboa midadasika 'wolfdog / wolf x dog'. Raha atao fitsipika, dia arakaraka ny maha ambony ny isa ara-filialana (na F #) no mora hitondrana ny biby. Ohatra, ny alika kely avy amboadia amboadia sy amboadia (na alika) madio dia hatao hoe F1. Raha nompiana biby F1 hafa io biby io taty aoriana, dia ho F2 ny zanak'omby vokatr'izany, sns. Ny isa dia manondro ny isan'ny taranaka lavitra ny amboadia madio.
Wolfdogs dia alika mifangaro ary toy izany dia tsy azo soratana amin'ny klioban'ny kennel malaza, toy ny American Kennel Club. Misy ny fisoratana anarana an-tserasera izay hanome taratasy ho azy ireo amin'ny sarany, fa fisolokiana amin'ny Internet izany - mitandrema ny mpividy. Misy vondrona / klioba mpiompy wolfdog vitsivitsy, ny Florida Lupine Association no tena fahita.
UCA - United Canine Association
Kyra, amboadia afovoany afovoany amin'ny taona 3
Kapiteny amboadia amboadia avo lenta.
Shango dia amboadia avo lenta. Manao asa fitoriana sy fanabeazana izy ary masoivoho ho an'ny taranany.
'Kyla the Wolfdog amin'ny faha-7 taonany. 44% izy Timberwolf , Amboadia 25% Tundra, 25% Akita Amerikanina ary 6% Alika mpiandry alemanina . Nividy azy aho ary nitondra azy nody tamin'ny 4 herinandro. Tena nanana izany izy fiaraha-monina aloha , Training SY vaky trano . Tena ara-tsosialy izy, miaro amin'ny fandrahonana tena izy, mahomby amin'ny fonosana. Tsy dia mahay izy alika kely, mahery setra, mivonika . Izy no alika sarotra indrindra hatrizay momba ny fiofanana sy ny fanovana ny fitondran-tena, nefa ny valisoa indrindra! Izy no tena namako sy ETA. Manana ny sofina sy ny rambon'ny Akita ao aminy izy, satria mamoritra toa ny rambony izy Spitz ny karazany sy ny sofina dia lehibe kokoa noho ny karazana amboadia volondavenona. Tena mpiremby izy. '
'Tala the wolfdog (Gray Wolf / Malamute / GSD). Izy dia mampiseho palitao lava kokoa noho ny amboadia (fototarazo Malamute) ary be dia be ny loko fandokoana alemanina izay gèt alika, saingy mbola tsy manana 'fijanonana' (ny teboka mihaona amin'ny handrina), manana loko mifangaro tsara (izany hoe: tsy misy sarontava husky misy demarcation mahery), ny masony dia mijerijery amin'ny zoro amin'ny tarehy (ary eny, mavo - fa misy * karazana alika manana maso mavo koa. Maso manga Tsy hitranga amin'ny wolfdogs noho ny atiny ambany. Ny hoho dia matevina sy mainty miavaka amin'ny saika. Manana tongotra lava izy, tratra ety dia lava, sofina madinidinika somary boribory, rambony mainty, tongotra an-damosin'omby, tongotra goavambe ary lava be (amboadia dia manodidina ny 26'-34 'eo an-tsoroka). Toetra ara-batana amboadia daholo ireo. Tsy saro-kenatra izy noho ny fifaneraserana tafahoatra hatramin'ny fahazazany, saingy maro no saro-kenatra. Nampidiriko ny sarin'ny palitao ririnina sy palitao fahavaratra ho fampitahana. Wolfdogs dia mazàna ho mpanakanto afa-mandositra ary manimba tanteraka ao an-trano na fiara. Matetika izy ireo dia tsy mandeha tsara mihitsy. Mitaky fikajiana ivelany toy ny zoo izy ireo ary tsy afaka mivelona amin'ny zavatra hafa ankoatry ny hena manta na kibble tsy misy voa tsara. Matetika koa izy ireo dia velona hatramin'ny 16+ taona eo ho eo, ka mba diniho tsara ireo zavatra rehetra ireo alohan'ny hitadiavana mpiompy. '
Tala the wolfdog (Gray Wolf / Malamute / GSD) amin'ny maha alika kely 4 herinandro azy.
'Lucian no Wolfdog atiny midina ambony amiko. Mora tantana izy noho ny biby avo lenta, fa ho an'ireo tsy manana traikefa amboadia taloha dia mety hametraka fanamby izy. Ny fanomezana an-tsitrapo ao amin'ny fitoerana amboadia na amboadia eo an-toerana, na fihaonana amin'ny olona amin'ireto biby ireto dia afaka manome traikefa amin'ny olona iray. Niara-niasa tamin'ny Wolfdogs avo lenta nandritra ny taona maro aho talohan'ny nahatsapako fa vonona tanteraka hitondra an'i Lucian ao an-tranoko. Tsy tokony hatao ambanin-javatra ny fananana Wolfdog! '
Varg a wolfdog atiny afovoany ambony.
Lakota dia amboadia amboadia afovoany aseho eto amin'ny faha-9 taonany.
'Ayashi dia amboadia amboadia amboarina avo amina amboadia Winddancer any Ohio. 2 taona izy ary mbola milalao ihany ary manao toy ny alika kely. Afaka manjakazaka amin'ny amboadia hafa izy indraindray, fa izy koa dia hikodiadia ary hampiseho aminao ny vavony amin'ny fotoana ahitany anao. tiany ny ankamaroan'ny olona ary tiany ny rano. jereo ny masony mikitroka, sofina manjavozavo tsara, tongotra lava, tongotra goavambe, palitao mifangaro, ary ny rambony mihantona. ny zavatra rehetra mahatonga azy ho tovovavy wolfy. tiako izy ary sambatra aho manana azy. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Wolfdog
Wolfdog Sary 1
Non-Wolfdogs: Identity diso
Fampahalalana Wolf Hybrid
Lisitry ny Alika Malamute Mix Dogs
Lisitry ny alika amboadia mifangaro
Lisitry ny alika mifangaro alika ao an-trano
Amboadia: sary an-tsokosoko voaangona
alikà tendrombohitra bernese alika retriever volamena
goavambe schnauzer fenitra poodle mifangaro
shih tzu sy pomeranian mifangaro
beagle border collie mix alika kely
pit bull and husky mix
boalavo terrier sy Chihuahua afangaro alika kely